နန္ဒာနိဟွန်း: ချစ်သူ မီးမီး အတွက် ...
ချစ်သူ မီးမီး အတွက် ...
Our Love Slideshow: NANDAR’s trip from United States to Tokyo, Japan was created by TripAdvisor. See another Tokyo slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.
ချစ်သူနှစ်ဦး ရာသက်ပန်ထာဝရ ပေါင်းစည်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ မနန္ဒာပုံကို မြင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ။ (ဂျပန်မှာ နေလို့လား မသိ၊ ဂျပန်မလေးနဲ့တောင် နင်လားငါလားပဲ)
ဂျပန်မနှင့်တူနေလို့ စိတ်ညစ်နေရတာ ဘုရား.....